Miyaad qaadan kartaa ama diidi kartaa tallaalka Covid-19 haddii ay qasab noqoto? Maxaa la sameeyaa? : Martin Vrijland
Miyaad qaadan kartaa ama diidi kartaa tallaalka Covid-19 haddii ay qasab noqoto? Maxaa la sameeyaa?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 14 May 2020	• 45 Comments
Tartiib tartiib, dad aad u tiro badan ayaa bilaabaya inay arkaan in dowladaha adduunka ay doonayaan inay isbedello waarta ku sameeyaan bulshada guud ahaan. "Xiritaanka caqliga leh" ayaa si tartiib tartiib ah loogu beddelayaa mid joogto ah, halkaas oo ay tahay inaad dib u soo iibsato xorriyaddaada. Caadiga ah ee cusub wuxuu noqonayaa hal mitir iyo badh bulshada waana inaad adigu iska bixisaa.
Waad shaqaalan kartaa la taliyayaal qaali ah si ay kaagala taliyaan sidii aad shirkadaada ugu dhisi lahayd hal mitir iyo badh oo aad iskugu halleyn kartaa sumad sicir; qiimaha qiimaha naftaada maxaa yeelay waxaad u baahan tahay inaad hesho ogolaansho rasmi ah oo loogu talagalay qiyaasahaaga iyo sumadda qiimaha macaamiisha, sababtoo ah qof waa inuu qufacaa mitirka qasabka ah iyo nuska iyo hoos u dhaca dakhliga ku soo gala.
Intaa waxaa sii dheer, tallaalka soo socda ee loo yaqaan 'covid-19' wuxuu noqonayaa mid khasab ah.
Marka laga soo tago su’aasha ah in tallaalkan oo kale si fiican loo tijaabiyey iyo in si siman looga fog yahay su’aasha ah in aan rabno iyo in aan rabno in hal mitir iyo bar mitir bulshada ah: dowladuhu waa ay adkeystaan ​​runtiina ma aadaan dadka mudaaharaadaya. dhageyso
Tiknolojiyadda waxaa loo isticmaali doonaa in lala socdo dhammaan tallaabooyinkaas. Horaan u saadaaliyay taas buuggayga 2019 oo waxaan horeyba saadaaliyay in qodobadan badan sanadihii la soo dhaafay. Teknolojiyaddaas iyo xogteedii wey si fudud ayaa loo riixi doonaa, maxaa yeelay waxaa jira shirkado aad u tiro badan oo mar labaad ku kasban kara bey'ad xiiso leh Kuwo aad u tiro badan ayaa hadda u shaqeeya shirkadaha waaweyn ee bixiya xalka ICT ama wakaaladaha dawladda ee hubiya inay sii wadi karaan bixinta lacagta gurigooda isla markaana ilaalinaysa qoyskooda. Dadkaas ayaa laga yaabaa inay u arkaan wax aan sax ahayn, laakiin markay tahay doorashada, inta badan waxay doortaan inay hoos u dhigaan si loo dammaanad qaado dakhliga.
Waan wada ognahay hadda waxa bulshada cusubi u egtahay. Saxaafadda iyo dowladdu waxay sii wadayaan in iibinta ay lama huraan tahay iyo sida loo soo bandhigo ay tallaabo u tahay tallaabo. Tallaabo talaabo ah, si ay dadka ku badan ay u aaminaan inay yihiin tillaabooyin muhiim ah oo lagu xakameynayo coronavirus.
Hawshu waxay ku socon doontaa mawjadaha 'adkeynta suunka' ilaa 'kaliya u daa ha dayrta' ka dibna mawjadda xigta ayaa imaan doonta. Saxaafadda, khubarada (soosaarka tirooyinka) iyo siyaasada ayaa na tusi doona, muddo ka dib markii loo baranayay hal mitir iyo bar iyo in yar oo qol ah oo loo guuro, dib u soo nooleynta fayraska 'corona virus', ka dib taas oo soo bandhigista qaybta xigta ee xirmada ay dadku soo saareen. la qabsan doonaa.
Akhristayaasha warbaahinta kale waxay badanaa raadiyaan macluumaad kusaabsan sida aan u ciyaarno. Waxaan jeclaan lahayn inaan akhrino qoto-dheer oo ku saabsan sida halista tallaalku u yahay, sida 5G loo istcimaali karo in uu na saameeyo, sida mulkiilayaasha Microsoft na siinayaan shahaadada tallaalka dijitaalka ah, sida Bill Gates u maalgaliyo warbaahinta iyo warshadaha tallaalka, sida barnaamijyada loo istcimaali karo inay naga caawiyaan si loo kormeero. Waxaan ubaahanahay macluumaad kusaabsan sida naloogu kaxeeyo shabakada si aan u kor u qaadno dadka kale wixii qatar ah oo na soo galaya.
Taasi waa wax aad muhiim u ah, maxaa yeelay hadaadan ogayn khatarta kugu soo food leh, kama boodboodo waqtiga. Si kastaba ha noqotee, waa in tallaabo xigta la qaado. Waa inaan la imaanaa xalka.
Halkan websaydhka waxaad ka aqrisay dhowr qoraalo kusaabsan sida aan ugu dhowaan karno bulsho aan lacag badan ku badneyn, mujtamac ay barnaamijyadooda, kamaradaha iyo xog weynaha ogaadaan meesha aan joogno ama aan heer kulka saxda ah ka leenahay 19) iyo cidda aan wada shaqeyno. Tallaabada xigta waa in lagu xiraa dhammaan xogtan qaab nidaam dhibco ah. Marka la haysto ama aan lahayn dhibco ku filan ayaa laga yaabaa ama uma bixi karo dibadda, tareenka ama diyaaradda. Dhamaanteen waan saadaalin karnaa hadda. Isku xirka dhammaan xogtaas oo ah calaamadaha dhijitaalka ah iyo xiriiriyaha dheelitirkaaga bangiga dhijitaalka ah ayaa dhammaystiraya sheekada.
Waxaa naloo kaxeeyaa shabakad oo Shiinuhu wuxuu bixinayaa tusaalaha ah sida adiga dowlad ahaan dadka ugu qasbi karto inay u hoggaansamaan. Shiinaha ayaa sidoo kale muujinaya sida shaqsiga mucaaradka u taagan in si fudud looga tago. Taasi waa saameynta tooska ah ee nidaamka noocan ah. Ugudambeyntii, shacabka ayaa u sujuudaya, qeyb ahaan sababtoo ah in badan oo bulshada ka mid ah laftooda ayaa u shaqeeya qeybo ka mid ah 'nidaamka'. Haddii aad ka shaqeyso ICT oo aad soo bandhigto softiweer keydka kombuyuutareedka ama aad keentid nidaamyada kamaradaha, haddii aad u shaqeyso sarkaal dambi baaris ama sarkaal booliis ah, wali waxaad dooranaysaa dakhligaaga. Taasi waa sida ay wax u socdaan.
Waa mala awaal in la yiraahdo, "Kadibna waxaan iska tuurayaa taleefankeyga casriga ah si aan nidaamka uga baxo". Waxaan u soconaa waqti ay ka qeybqaadashada bulshada ay ku noqoneyso wax aan suurta gal aheyn iyadoo aan qotodheer la sameynin ama aan lahayn hay'ad shaqsiyeed (shirkadaha). Isku mid ayaa ku dhici doona tikniyoolajiyadda corona-ga cusub. Hadaad tuurid taleefankaaga casriga ah, ma awoodi doontid inaad gasho supermarket-ka.
Waxay ku imaan doontaa taasi? Talaabo talaabo ah waxay u badan tahay inay ku imaan doonto taas. Markaa waad noolaan kartaa oo kaliya haddii aad leedahay jardiinada aad gaarka u leedahay, laakiin markaa waa inaad sidoo kale ka heshaa abuur aad iska leedahay, maxaa yeelay isku filnaanshahaas ayaa waliba laga mamnuuci doonaa muddada dheer.
Tallaabada xigta waxay noqon doontaa in aan mar dambe laguu oggolaanin inaad gasho meelaha dadweynaha haddii aadan tallaal qaadan. Xogta waaweyni sidoo kale door bay ka ciyaari doontaa tan. Haddii barnaamijkaagu kuu sheego inaad qaadatay tallaal, irridda laga soo galo supermarket-ka ayaa kuu oggolaanaya inaad gasho; haddii kalese. Marxaladda ugu dambeysa, app noocan oo kale ah waxaa badali doona dabeecad dijitaal ah oo ku xiran jirkaaga. Wayna dhameystiri doontaa oo keliya haddii dheelitirkaaga bangiga sidoo kale lala xiriiriyo waxaas oo dhan. Dhawaan ma jiri doontid baxsad mooyee inaad dooratid inaad ku noolaato 'duurjoogta', laakiin qaar badan ayaa noqon doonta buundada aad u fog.
Waan qaylin karnaa waxaan rabno; Waxaan ka qaylin karnaa inaanan dooneynin dhammaantood, laakiin waa sida qaylada cidlada ah. Intooda badani waxay ku tiirsan yihiin 'nidaamka'. Taasi waa sababta ay tahay waqtigii la bilaabi lahaa ka fikirka: Haddii aadan garaaci karin 'em, ku soo biir' em.
Waa inaan la imaanaa xalal la taaban karo oo sidoo kale la qabsan karo kuwa u shaqeeya 'nidaamka'. Waa inaan la imaanaa xalal la taaban karo oo macquul ah oo hubinaya in dadku aysan lumin xaqiiqooyinka, laakiin ay iyagu leeyihiin fikrad. Waxaan hadda si buuxda ugu tiirsannahay go'aannada kor ku xusan. Nidaamka siyaasadeed ee hadda jira wuxuu nagu qasbayaa in aan aqbalno go'aannadaas iyada oo aan wax qaab ah looga qaybgelin. Tan waxaa loo samayn karaa si ka duwan. Taasi waa inay kala duwanaato.
Fursad baa jirta! Ka dib oo dhan, waxaa jirta fursad ah in si xagjir ah wax looga beddelo isla teknoolojiyaddan maalmahan la joogo, iyada oo aan tan la samaynayn in bulshada oo dhan laga leexiyo. Uma baahna kacdoon weyn oo caan ah ama kacaan. Qof kastaa wuu sii wadi karaa wuxuu sameeyo uun.
Waxa kaliya ee isbeddelaya waa qaab dhismeedka go'aanka. Wasiirrada iyo mas'uuliyiinta hadda u warramaya taajka oo ku riixaya sharciyo la'aan iyada oo aan dadku si dhakhso leh u oggolaanin waa inay u soo sheegaan dadka. Wasiirada waa in lagu badalaa wakiilo si toos ah loo soo doortay oo dad ah (kuwaas oo runtii matalaya dadka halkii taajkii laga saari lahaa).
Waxaas oo dhan waxaa suurto gal ah iyada oo loo marayo mabda'a dimuqraadiyadda tooska ah. Dimuqraadiyaddaas tooska ah, waxaad ku dooranaysaa wakiilladaada internetka. Adigu waad noqon kartaa musharax ama soo bandhigto musharixiin waxaana nidaamka codeynta uu hubinayaa xulista iyo koritaanka taageerada. Waa waxoogaa sida nidaamyada codeynta sida Holland Got Talent iyo barnaamijyada kale ee TV-ga. Teknolojiyad ayaa jirta, fursadaha ayaa jira waana shaqeyn doonaan.
Xildhibaanada tooska loo soo doortay waa inay fududeeyaan shuruucda oo ay u bandhigaan dadka si ay u ogalaan ama dib ugu eegaan. Kumanaan sharciyo ah, ilaa cadeyn, laga bilaabo tiro ilaa tayo. Toos uga qaybgalka dadweynaha.
Waan sugi karnaa illaa sharciyada tallaalka ee khasabka ah ay noo oggolaadaan inaan dooranno qaadashada tallaalka ama xabsi aan aadno, ama aan la qabsan karno halbeegga. Waa inaan qabsanaa qalalaasahan si aan isbedel u keenno. Beddel habka aan rabno! Dimuqraadiyadda tooska ahi waxay ku beddeli kartaa qaab dhismeedka awoodda jira iyadoo loo marayo nidaamka codbixinta ee internetka dhowr bilood gudahood.
Hadda waa waqtigii loo abuuri lahaa taageero tan. Nafsaddaada ka faa'iideyso fursadda, ka fikir oo akhriso sida ay u shaqeyso. Waxaa la joogaa waqtigii wax la qaban lahaa oo isbedel la noqon lahaa. Riix batoonka si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo saxeex codsiga.
dimuqraadiyad toos ah hadda
Waqtiga isbedelka weyn iyo wareegga weyn: saxeex codsiga
Tallaabooyinka xiritaanka Coronavirus covid-19 waa la kordhiyay Abriil 6 wuuna sii cuslaanayaa
Tallaalku ma farsamo ahaan loo isticmaali karaa inuu la qabsado DNA-ga?
Ugu yeer qof walba: fallaagow! Hagayaasha
Sida loola macaamilo coronavirus (xirida) cabbiraadaha: talooyin wax ku ool ah
Tags: ka badan, apps, weyn, Covid-19, data, dimuqraadiyad, toos ah, er, featured, fvvd, dhacdaa, Waan diiday, online, cod bixin, tiknoolaji, tallaalka, tallaalka, waajibaadka talaalka, ballanqaad, wat, diido, diidmo, sharciga
14 May 2020 ee 12: 22
Riffian ayaa qoray:
14 May 2020 ee 13: 16
Laakiin waa bilaash Martin, Jan Peter wuxuu ciyaaraa door hormarineed
Raiisel wasaarihii hore ee Balkenende wuxuu doonayaa qofkasta talaal corona oo bilaash ah
14 May 2020 ee 13: 26
Oh faraxsan, si fiican markaa markaa ma jiraan wax laga walwalo.
Bilaash ah = dheriga canshuurta oo markaa ugu dambeyntii loo marayo canshuur kordhin = ma ahan bilaash
17 May 2020 ee 15: 23
Waxaa loo ballan qaaday in tani ay ka soo baxeyso Madurodam, ugu dhakhsaha badan haddii shaqo ka fadhiisinta tiro badani ay sabab u tahay cudurkan, xajmiga afku waxay u tahay aabe. Ku filan oo ku filan inuu qabto shaqada wasakhda ah ...
Michael Gove ayaa shaaca ka qaaday in kabadan 17,000 oo ah kuwa raadadka la xiriira coronavirus kuwaa oo hada la shaqaaleysiiyay - kaliya xishood 18,000 ah oo bartilmaamed ah - iyadoo la sheegayo in kaliya la shaqaaleysiiyay sedex bilood bilow ah.
14 May 2020 ee 13: 23
Covid, sidaa darteed wuxuu u taagan yahay Shahaadada Aqoonsiga Talaalka (2020)
14 May 2020 ee 13: 33
Sii farta 🖕, dheh MAYA
14 May 2020 ee 14: 41
19ka ka dambeeya Covid waxay u taagan tahay AI, haddii aad u tarjunto xarfaha lambarro. Markaa Shahaadada Aqoonsiga Talaalka Aqoonta Artificial Intelligence.
Waxaan qiyaasi karnaa halka dhammaan xogta la xado ay ku dhamaanayso, nidaamka dabcan Palantir! Raad-raac iyo Raad-raac
14 May 2020 ee 15: 33
@riffian si sax ah !!! AI waxay u baahan tahay in la quudiyo, haa waa sax!
Waxaan ubaahanahay jawaabo deg deg ah oo ku saabsan hishiiska weyn ee xogta NHS COVID
Maxey dowladda Boqortooyada Ingiriiska u diiday inay siidaayaan faahfaahinta xogteeda 'aan hore loo arag' ee wareejinta kooxda farsamada ee Mareykanka? Haddii aanaan helin jawaabo, waxaan ka raadsan karnaa maxkamadaha.
Future ayaa qoray:
14 May 2020 ee 14: 58
Fiidiyowga wanaagsan, gaar ahaan kan dambe waa dhammaadka I WA, akhriska ujeeddada, waa yoolka. Falsafada ayaa had iyo jeer isku shaandheeya ereyada.
Halkan mar kale loogu talagalay akhristayaasha cusub. Nasiib wanaag, inbadan oo dheeri ah ayaa lagu daray. Dadku sidoo kale waxay ku deeqaan waxa ka caawiya Martin waxoogaa. Codkiisu waa mid si cad loogu kalsoonaan karo oo caqli badan. Tan meel kale ka aqrin maysid. Goobtiisa waa in lagu hayaa hawada. Fiiri maqaalkiisa ku saabsan weerarkii Ddos ee lagu soo qaaday boggiisa
Taasi waa mid aad uga sii xoog badan marka loo eego tirtiray fiidiyowga Jensen 33. Dabcan, dabcan, waxaa lagu heshiiyay Yt. Iyada oo la iibinayo maaliyaddiisa, ka dibna dhahdo taasi way hagaagi doontaa. Wuxuu ku nool yahay Vondelpark, sidoo kale wuxuu leeyahay lacag sida biyaha. Dacwadayda ayaan xirayaa.
Sidoo kale ogow sida had iyo jeer Jensen uga hadlo kabaha askariga qoortiisa.
Iyo halkan mar kale xusuusintii sababta ay tahay inaad runtii u qaadan weydo tallaalkaas. Haddii aad wax ku baratay sida halkan oo kale boggan, oo waxaad helaysaa xoogaa aqoon ah. Ma ogtahay inaad rumeysan tahay ama aadan u rumeysan karin wax kasta oo lambarradan lagu xusay. Xaqiiqdiina ha u ogolaanin inay jirkaaga gasho.
XanderN ayaa qoray:
14 May 2020 ee 18: 34
Ogolow. Ma helin waxkasta oo Martin qoro ama soo jeediyo, mararka qaar waxay u aragtaa waxoogaa xad-dhaaf ah ama wax aan macquul ahayn, laakiin codkiisa qaaliga ah wuxuu yahay maahmaah 'canary ee macdanta dhuxusha' ee xorriyadda hadalka ee Nederland. Boggan waa in uu sidaa ku sii socdaa una socdaa, runtiina: booqdayaasha iyo taageerayaashaba, ayaa ka sii wanaagsan.
Waan ku raacsan karaa qodobka kore, laakiin waxaan weli aaminsanahay in isbedelada la soo jeediyay ay tahay in lagu faafiyo waqti dheer (haddii aad rabto inaad hesho dad badan intii suurtagal ah, iyo gaar ahaan wadamada kale). Dadka waa in marka hore loo sameeyaa 'u bislaaday' sida noocan ah oo kale. Haddii kale, qaar badan ayaa argagax badan, waxaad la kulmi doontaa rabshado, fowdo, murugo, taasna ujeedku maahan.
Isbarbar dhig wmbka qof lugaha ay barafeen -30 digrii xilliga qaboobaha. Haddii aad isla markiiba ku hoos gasho qubeys kulul, waxaad waxyeellada u sameyn doontaa mid aan la sii dayn karin. Waa inay noqotaa mid tartiib-tartiib ah, sidaas oo ay tahayna waxay la jirtaa dadka intiisa badan. Sii iyaga 10 sano si ay tan u sameeyaan (in kastoo aan ka baqayo inaanan haysan 10 sano oo aan kaga horjoogno sharciga dagaal ee hadda inuu noqdo dowlad bilays oo joogto ah).
14 May 2020 ee 20: 33
Waxaan u arkaa mid ku habboon 'habbooni' iyo 'xad-dhaaf' ah oo aan ku habboonayn. Haddii hal xisbi uusan macquul aheyn oo uu aad ugu mashquulsan yahay, waa dowladda isku xirnaanta.
Maahan fikirka Xander ee halkan ku yaal ee loo tixgeliyaa inuu yahay mid cabbir ah oo aan ku xisaabtameyno xukunkaaga 'X Eebbe ee is-xaqnimada'. Waxaa la joogaa waqtigii aan iska dhaafi laheyn dhaleeceyn noocan oo aan tallaabo qaadi lahayn. Noqo isbedelka adoo sameynaya.
Waxaan si xoogan u aaminsanahay in nidaamka cusub ee lagu soo bandhigay fvvd.nl ay tahay in la dejiyo dhowr bilood gudahood. Waqti uma lihin inaan khasaarinno.
Aad ayaan u diidanahay faallooyinkaaga. Haddii aan dhowr bilood oo dheeraad ah sugno, golaha wasiirrada hadda jira wuxuu bulshada oo dhan u beddelay hal mitir iyo badh bulshada ah iyo dhammaan nooc kasta oo tikniyoolajiyadeed ah ayaa la hirgaliyay oo nooga dhigaya shabakadda xakamaynta guud.
Sidaa daraadeed waxaan dhihi lahaa: ha dul dhigin jidka dheer oo aad ugu dirtid mid xad dhaaf ah oo aan macquul ahayn. Waa wax xad dhaaf ah oo aan macquul ahayn in aan sii wadno cabashada iyo qorista qodobbada halka ay wax walba qaldamaan iyo halka tallaallada iyo shahaadooyinka dijitaalka ah ay waxyeello noo geysan karaan.
Waa fulaynimo in la dul dhigo bislaada dadka. Dadku sidoo kale diyaar uma ahan tilaabooyinkan xiritaanka waxaan hada aragnaa in dowlada ay ku riixeyso talaabooyin 'aan macquul aheyn' iyo 'xad dhaaf' isbuucyo gudahood.
Marka waxaan dhahay MAYA si aad ah ayaan u xanaaqsanahay dhaleeceyntaada waxaanan soo jeedinayaa inaad dadka ugu yeerto Tallaabo qaado HADA. Waa 1 daqiiqo illaa 12 oo ma sugi karno 10 sano.
Waxa kale oo aad ku weydiin kartaa su'aalaha qaybta su'aasha & jawaabta ee bogga: https://www.fvvd.nl/qa/
14 May 2020 ee 22: 14
Rose ayaa qoray:
15 May 2020 ee 07: 03
Dhakhaatiirtu aan dawliga ahayn waxay sameeyaan nabarro fudud ...
Dadku waxay u baahan yihiin in la ruxruxo, laakiin waxay umuuqdaan inay miyir ku jiraan.
15 May 2020 ee 16: 01
Waxaan ka helay jawaab-celintaada Xander inay si wanaagsan u nadiifsan tahay xitaa sababta oo ah waxaan qabaa shaki aad u xoogan oo ah in Xander uu yahay mid wax dumin kara. Ma doonayo inaan sharraxo taas. Akhristaha caadiga ah waa ogaan karaa waxaan ula jeedo.
14 May 2020 ee 13: 37
14 May 2020 ee 15: 01
Waa wax laga xumaado in aanan waligey arag muuqaalkaas, waligey aan akhrin TV oo aan CD-ga u rogay. Xaqiiqdi waa mid aad u cadcad in la duubo. Iyo waliba taageere muusikadaas kooxdan. Waayihii hore.
14 May 2020 ee 13: 56
Barnaamij dheeraad ah oo saadaalin ah, qoraalka ayaa mar hore lagu daray aagga dhintay - PLAGUE taxanaha 2003
14 May 2020 ee 15: 47
Xaraashka muhiimka ah ee indheer garadka ayaa jira xitaa kahadalka corona (ra33oon), Hoos udhaca laga soo bilaabo 1993 iyada oo tuuglas la tuhunsan yahay inuu caadi ka duwanyahay wajiga.
tobanaan milyan oo dad ah ayaa mar dambe loo baahan doonin.
14 May 2020 ee 14: 06
Fasalka dhexe / fasalka ayaa gebi ahaanba dhaqaale ahaan looga saari doonaa ugu yaraan sanad kale, si markaa ugu dhakhsaha badan loogu wareejiyo Aabaha Gobolka sida wan-yaryar.
14 May 2020 ee 15: 09
Runtii haa. Sidan ayaa qof walba uu si buuxda ugu tiirsan yahay. Uma maleynayo inuu si daran u fekerayo maxaa yeelay waa la badbaadiyaa. Kaliya waxaa loo badbaadiyey hab sidan oo kale ah oo aan u maleynayo inaad jannada kufiicnaan karto. Ka dibna badbaadiyahaagu sidoo kale waa kii si ula kac ah adiga iyo reerkaagaba ku dhex tuuray ceelkaas. Laakiin waxay markii hore u arki doonaan si ka duwan sidii hore. Ilaa ay goor dambe ka soo daaho, ka dib oo dhan, tallaallada waxaa laga yaabaa in durba lagu duriyo dadka ku nool waddamada aan lala xiriirin kiis kasta. Waxaad ka timaadaa tuhmanayaasha caadiga ah, oo waxay diyaarsadeen difaac difaac naftooda. Tallaalkani miyuu wax kuu geysan karaa si kastaba. Qabanqaabadaas ayaa runtii sheekada oo dhan sheegeysa.
14 May 2020 ee 15: 28
Halkan waa yeey kale oo dharka idaha ah Eric Schmidt, dhammaan tuhmanayaasha caadiga ah ayaa ku lug leh hawlgalkan ugu dambeeya ee addoonsiga. Sidoo kale waxay ku daraan jawiga cimilada ajendahooda inta ay mashquul yihiin
Waxaa lala xiriirinayaa kooxda baadi goobeysa oo ay maalgeliyeen Soros iyo Gates, ayaa leh Clinton Clinton
Waa inaan 'uga mahadnaqnaa' shirkadaha waaweyn ee 'dadku jecelyihiin inay sumeeyaan' (Waxaan ugu yeernaa FASCISM)
Fiidiyowga waa la qariyey, sida saxda ah ee ay u shaqeeyaan.
14 May 2020 ee 15: 37
https://www.cbsnews.com/news/trump-economic-club-speech-live-stream-president-trump-at-the-new-york-economic-club-today-2019-11-12/ (Trump waa qeyb kamid ah dhibaatada, iska ilow Q bullshit !! aamin qorshaha, waa qorshahooda)
14 May 2020 ee 17: 20
Trump wuxuu door bidaa tallaalka, fiiri sida dhaq dhaqaaqa Q uu uga jawaabayo.
15 May 2020 ee 16: 41
Dib-u-dhigis: Qorshaha masiibada ah ee 'qorshihiisa' ee ah in xoghayaha warfaafinta ee warfidiyeen suxufiyiinta waxaa lagu badbaadiyey warbixin wargame oo ay sidoo kale haysato - taasoo ka digaya bixinta sahay caafimaad, dhaqaale aan ku filneyn, iyo jahwareer federaal ah bilo kahor faafitaanka.
20 May 2020 ee 18: 50
si fiican hadda waxaan bilaabay inaan fahmo xoogaa ka fiican ...
XIRFADAHA MEDIA EE ISRAEL XIRIIRKA ISKUULKA ERIC EE 'NYITS CITIES'
14 May 2020 ee 15: 46
Halkan ka eeg sida ay u xariif ku yihiin ciyaartaas. Kaliya waxay muujinayaan waxay samayn doonaan. Ka aqri carruurta qoysaska. Caafimaadka awgiis, iyo sababtoo ah ma haysatid 2 musqulood oo karantiil ah. Laakiin qof kuu sheego cidda loo maleynayo inay ka soo horjeedaan. Waxay bixisaa ficil aad u liita. Laakiin waxaad haysataa tiro qoraal ah, oo loogu yeero inaad midba midka kale iska ilaaliso. Hadana waxay leeyihiin lambarka raadinta xiriirkaaga. Ah haa haa cunugaada ayaa laga yaabaa inuu mar dambe ku arki doono mar labaad, mana dhinto Covid. Qoraalka 80123, akhri 9 iyo 33. Oo tuur wixii aad haysay oo dhan. Ka dhig America …… .. sifiican
Kaliya fiiri falka, oo waad arki doontaa waxa ay soo galayaan.
14 May 2020 ee 16: 31
Ballan qaadashada Amarka Dunida Cusub
14 May 2020 ee 21: 56
15 May 2020 ee 03: 25
Qof kasta oo waligiis noloshiisa u codeeyay waa inuu saxeexaa codsigan. Waxaan hadda si cad u arki karnaa waxa dhaca marka aad u ogolaato carruurta yar yar ee telefishinka ka talisa noloshaada. Hadday tahay uun in la helo feejignaan inay ku saleysan tahay been, sida aad ku aqriso qodobkaan. Codbixinta mar labaad waxay nagu qaadaysaa xitaa xidhitaanka.
Xaqiiqdii ma qaadan karo qori ama tallaal, laakiin waa la mamnuucay. Si kastaba, waa inaan dib ugu laabanaa dabeecadda si aan nafteenna u helno. Xitaa Ciise waa inuu aado lamadegaanka si uu u xirmo. Ma dhahayo waa inaad rumeysaan Ciise, waxaan dhahayaa kaliya waxaan ku soconaa isla wadadaas.
Marcos ayaa qoray:
15 May 2020 ee 06: 30
Way fiicantahay in ay wali jiraan dhakhaatiir sida dhakhtarkan Jarmalka ah https://www.youtube.com/watch?v=6bIAXtciwk0&feature=youtu.be
15 May 2020 ee 06: 59
Fiidiyowga fiidiyowga ah ee dhaqtarka Jarmalka ee xiriirinta hore waxay sheegaysaa inay tahay wax aad run u ah. Tani waa run, maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay in odaygu caadi ahaan suurtogal ka dhigtay inuu nagu wareejiyo xaalada aan ku jirno hada. Marka waxaa jira baahi cusub oo caadi ah, oo aan ahayn bulshada 1,5 mitir oo leh farsamooyinka kormeerka oo dhan, laakiin waa wax cusub oo caadi ah oo inta badan u dhigma barta Martin FVVD. Waxaa laga yaabaa in tani lagu dari karo farriinta FVVD?
15 May 2020 ee 09: 48
Waxaan rumeysanahay in fariinta Martin gebi ahaanba ay cadahay!
Kabaha xarkaha ayaa qoray:
15 May 2020 ee 08: 18
Ugu yaraan aniga "duurjoogta". Mar alla markii aan noqono dowlad buuxda oo dhalaalaysa ayaan alaabtayda u xirayaa oo waan ka dhammaaday. Waxaan doorbidi lahaa inaan gaajo ku dhinto meel dhexe oo aan meelna uga dhicin xorriyadayda.
15 May 2020 ee 09: 47
Uma maleynayo inaad tagi karto marka gobolkaas booliiska oo buuxa ay jirto. nidaamka booliiska = nidaamka feudal, waxaad qayb ka tahay gobolka. Nidaamka foosha xun, addoonku ma sameyn karo mana aha inuu sameeyo wax la'aan rukhsadda milkiilaha / gobolka.
Intaa waxaa sii dheer, xaggee rabtaa inaad aado wax walba oo caalami ah ayaa ku xiran, isku dubbaridaya oo gacanta ku haya iyaga Waxaan la yaabanahay haddii deganeyaasha aad jeclaan lahayd inaad u tagto ay ku sugayaan adiga. Tartan ayaa waliba ka dhex jira shakhsiyaadka. Waxaan ku jirnaa xaalad adag sidaa darteed waa inaan nafteena ku xalinnaa halkan Madurodam. Dadweynaha guud wali ma fahmin iyada oo lasocod waara.
16 May 2020 ee 10: 51
Halkaan Martin waad ku saxsan tahay waxaas oo dhan, iyo gaar ahaan saamaynta chimeric.
Bixinta Tallaalka Coronavirus https://patents.justia.com/patent/10130701 loogu talagalay in loo adeegsado Tallaalka Coronavirus-ka Attenuated Coronavirus. Bixinta Borotiinka Borotiinka Chimera https://patents.justia.com/patent/8828407 Madaxa Chimera Libaaxa, jirka Riyaha, Dabaqa masduulaaga ah “She-Goat” macno ahaan waxaa loola jeedaa “Xilliga Jiilaalka” ee loo yaqaan 'Capricornus Goatane' ee Jiilaalkii; Chimera waa xayawaan dilaa ah oo laga sameeyay xayawaan kale, si sax ah muxuu yahay Tallaalku.
Qodobka ugu hooseeyaina wuxuu ka yimid waxbarista Freemasons-ka iyo wargeyskooda. Si kale haddii loo dhigo waa inaan si dhakhso leh uga jawaabnaa. Markaa waad aragtaa waxa qof ka soo bixi karo qoraalka calaamadda. Marka walxaha naf-gooyada ah, oo si fudud loo dhigo, waxay rabaan inay ku dilaan, oo ay naftooda u abuuraan adduunyo cusub. Sidee cadaabta ay dad badani ku biireen caqiidadan.
Ududuwaha ayaa curyaan ah iyada oo wajigiisa lagala kulmayo shirqool.
Marka cabsi badan ma uusan rumeyn karin inuu ufiican yahay.
Agaasimaha FBI, shirqool noocee ah?
Wuxuu sidoo kale ka hadlayaa Gilecaad, oo ah tallaalka tallaalka. Maxaa afka Cibraaniga loogu talagalay Galeed.
Aqri ururinta markhaatiga magaca chaldee oo u dhigma Galeed oo hebrew ah. Labaduba waxay calaamadinayaan goobta axdiga. Inta u dhaxaysa Yacquub iyo laban gen 31:47 (tani waa in la muujiyo waxa ay raacayaan, ma aha in qof loo keeno kutubta)
Pope Francis encyclical Laudato si (warqad waxbarasho) wuxuu ku baaqayaa gawraca 6 bilyan oo qof.
Eeg faahfaahinta: Iyo waxa sida muuqata ay doonayaan inay fuliyaan. Trump ayaa sidoo kale u muuqda inuu ugu yeerayo milatariga inay qof walba tallaalaan, oo ay akhriyaan kuwa dhintay. Ameerika, oo ay ku jiraan 400 milyan oo hub khaas ah gacantiisa ku jira, ayaa sidoo kale xasilloon. Nasiib darro in aad sidaas shuruud ku heli kartaa. Aniguna uma doodo rabshadaha. Laakiin tuhmanayaasha caadiga ahi runtii waa sameeyaan.
17 May 2020 ee 12: 21
Waxaan sidoo kale diidi lahaa baaritaanadaas, maadaama ay sidoo kale buuxin karaan keydka macluumaadka DNA. Die Schippers ayaa hadda ku sugan shirkadda DSM iyadoo madaxii hore ee DSM Sijbesma uu hadda mas'uul ka yahay tijaabooyinka. Fiiri hareses ordaya, tuhmanayaasha caadiga ah waxay ku ciyaaraan labada dhinac, toosi !!
Qoob ka ciyaarka kursiga waa dhameystiran yahay
17 May 2020 ee 18: 21
In ay wali haysato goobo saaxiibo ah, oo karaahiyo ah ... ... Sidoo kale waa wax weyn in nala cadeeyay 13.33 daqiiqo. Sidee cajiib ah oo dhibaatadan wax looga qabtey. Iyo sida ay addoomayaashu u macaan yihiin. Nasiib darrose, adoomadu badanaa waa dadka damiirka leh. Lama dhihi karo dhamaan jilayaashaas.
17 May 2020 ee 14: 29
Maxaa tallaal ah haddii ay jiraan dawooyin ku filan oo looga hortago nooc hargab oo kaladuwan?
WHO Ayaa Bixisay $ 20M $ Siinta Sunta COVID-19 Cure - Madaxweynaha Madagascar
Waxaa qoray GreatGameIndia -May 16, 2020
Horumar naxdin leh ayaa Madaxweynaha Madagascar waxa uu ku andacooday in hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ay ku bixisay laaluush dhan $ 20m si loogu sumeeyo cudurka COVID-19. Daaweynta dhirta ee loo yaqaan COVID-19 Organics oo laga sameeyay Artemisia ayaa lagu daweyn karaa bukaannada COVID-19 toban maalmood gudahood.
18 May 2020 ee 13: 33
Gudaha Nigeria, aasaaska biilasha lagu soo aruuriyo ayaa ku hoos jirta muraayad weyn ka dib eedeymaha laaluushka ah, Burundi iyo Tanzaaniya waxay fureen WHO / melinda iyo xubno biil ah. Markaa sidoo kale waa suurtagal, waxaan tusaale ku soo qaadan karnaa halkan.
18 May 2020 ee 18: 05
Waxaan sii wadaa inay la yaabaan BMF. Iyo gaar ahaan inay jiraan dad badan oo difaacaya iligga iyo ciddiyaha. Sababtoo ah wuxuu siiyaa wax badan hay'adaha samafalka. In kasta oo uu ugu yaraan 80% ku soo noqdo maalgashiga. Haddii uu Bill runtii macaanaa, isaga iyo saaxiibbadiisa hodanka ah waxay adduunka ka badbaadin lahaayeen gaajo iyo harraad. Halkii uu ka ciyaari lahaa kala qaybin oo uu xukumo dhulkiisa imtixaanka adduunka oo dhan. Taasi ma sameeyo, oo wuxuu aadanaha ugu adeegsadaa xayawaanka tijaabinta. Dadku waa inay wali banaanka istaagaan. Waxay haystaan ​​lacag aad u badan, waxay xalin karaan dhibaatooyinka xun ee adduunka usbuuc gudihiis. Gaajo malahan oon, harraad ama dagaal yari dhimashadda caruurta iwm. Laakiin laakiin sidaa ma yeelaan, sidaa darteed wax wanaagsan oo ku saabsan BMF oo dhan kama fiicna. Xargaha nooca ugu hooseeya, oo nasiib darro ah lacagta ugu badan.
20 May 2020 ee 08: 46
Waxaan la yaabanahay haddii RIVM ay tuurtay moodooyinkaas ku yaal Kuliyadaha waqtigaas dhexdeeda, maxaa yeelay wax dhibaato ah ma jiraan. Xitaa caddeyn dheeri ah oo ah in la been abuuray xogta si loo taageero ajende gaar ah:
Corona-Modellierung dagaal “schlimmster Software-Fehler aller Zeiten”
Benachrichtigung über neue Qodobka:
Die Modellierung des Imperial College zur Corona-Epidemie, auf der umfangreich Maßnahmen und Verbote beruhen, weist weyn Software-Fehler auf, sagen zwei weltweit führende Daten-Ingenieure.
20 May 2020 ee 10: 46
ma waalantahay, moodooyinkaas aad ayey ufiican yihiin in la tuuro "IT WOBBLES"
RIVM: nambarka taranka 'wobbles' inta u dhaxaysa 0,7 iyo 1
20 May 2020 ee 13: 42
hahahaha idd Wuhan Wiggle inay noqoto mid sax ah.
23 May 2020 ee 15: 43
« Hoos u dhaca weyn ee lacagta inta lagu jiro xiisadda corona waxay horseedaa sicir barar: waa xalka bitcoin?
Masruufka ka dhanka ah Arimaha Dowlada Jordie Zwarts ayaa lagayaabaa tan, laakiin wax guul ah ma gaaro »
Wadarta booqashooyinka: 2.480.502
Amalek op iPhone wuxuu qariyaa barnaamijka 'covid-19 app' ee ugu dambeeyay i-OS 13.5
SalmonInClick op Immisa qof oo reer Dutch ah ayaa wali bixin kara biilashooda inta lagu gudajiro qalalaasaha Corona?
Sunshine op Awoodda isbeddelka waxay ku bilaabmaysaa daadinta cabsi, barnaamijyo iyo khiyaanooyin been ah waxayna isu beddelaysaa kacaan run ah